April 2019 - Page 5 of 5 - Puntland Mirror Believable Media Website
April 3, 2019 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) 202 arday oo kala kala socda kulliyado kala duwan ayaa maanta oo Arbaco ka qalinjabisay Jaamacadda Puntland State Univeristy (PSU). Madaxweyne ku xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cusmaan iyo guddoomiyaha baarlamaanka Puntland Cabdixakiin Maxamed […]
April 2, 2019 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Mashruuc waddooyin dhisid ah ayaa maanta oo Talaado ah laga bilaabay magaalada Garoowe, ee caasimada Puntland. Madaxweynaha dowladda Puntland Axmed Cilmi Cusmaan ayaa dhagax dhigay dhismaha mashruuca kaasoo ka kooban afar waddo oo […]
April 1, 2019 Puntland Mirror 0
Boosaaso-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowladda Puntland ayaa safarkiisii ugu horeeyay ee dalka dibadiisa ah geli doona asbuuca soo socda. Siciid Cabdullaahi Deni ayaa safarkiisa ugu horeeya ee dalka dibadiisa ah ku tagi doona dalka Isutaga Imaaraatka […]
Kooxdii ugu horeysay oo ciidamo Turkiga ka socda ah oo yimid Soomaaliya
Muqdisho-(Puntland Mirror) Kooxdii ugu horeysay oo ciidamo ah oo ka socda Turkiga ayaa yimid Soomaaliya. In ka badan 200 ciidamo Turki ah ayaa kasoo degay Muqdisho shalay oo Talaado ahayd si ay u tababaraan ciidamada [...]
Guddiga Hirgelinta Doorashada Heer Maamul Goboleed ee Puntland oo soo saaray liiska guddiyada xulista ergooyinka lixda kursi ee dhiman
Garoowe-(Puntland Mirror) Guddiga Hirgelinta Doorashada Heer Maamul Goboleed ee Puntland ayaa maanta oo Arbaco ah faafiyay liiska guddiyada xulista ergooyinka lixda kursi ee dhiman. Hooska ka akhriso liiska guddiyada. Doorashada lixda kursi ee dhiman ayaa qorshuhu [...]
Qaramada Midoobay, Midowga Afrika, Urur-Goboleedka IGAD, Midowga Yurub, Ethiopia, Italy, Sweden, Boqortooyada Midowday ee Ingiriiska iyo Dowladda Maraykanka ayaa soo dhoweeyay horumarka muhiimka ah ee Madasha Hogaanka Qaran (MHQ) usbuucan ka gaartay hanaanka geedi-socodka doorasho ee [...]